Fahad iyo Farmaajo oo isku dhiibay Yuusuf Dabageed | KEYDMEDIA ONLINE
BALADWEYNE, Soomaaliya – Wafti qarsoodi ah oo ka socday Madaxtooyada, ayaa 17 October 2021 ka degay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaas oo kulamo saacado badan qaatay la yeeshay Madaxweyne ku xigeynka Hirshabeelle, Yuusuf Axmed Xagar (Dabageed).
Waftigaan, oo doonayay in aan lagu baraarugin u jeedka socdaalkooda, ayaa ku lug-daartay, safar uu Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada (XFS) Duran Axmed Farax, ku tagay Baladweyne, si uu kaga qeyb galo munaasabada xarigga looga jarayay Garoonka Diyaaradaha Ugaas khaliif.
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ayaa Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada, Cabdisaciid Muuse Cali iyo ku-xigeenka Agaasimaha Cabdinuur Maxamed Axmed, u diray Hiiraan, iyadoo la oofinayo qeyb ka mid ah ballan hore loola galay Dabageed, oo ku wajahan doorashada kursiga Golaha shacabka ee BFS ee sumaddiisu tahay hop#86.
F&F, oo rumeysan in waddada kaliya Fahad gacmaha sharciga uga dhuuman karo afarta sano ee soo aaddan ay tahay, inuu xubin ka noqdo baarlamaanka 11-aad, ayaa Yuusuf Dabageed, kula heshiiyay inuu gacan ka geysto boobka kursiga hop#86 oo baarlamaankii 10-aad uu ku fadhiyay Faarax Sheekh Cabdulqaadir.
Sida ay sheegaan ilo xog ogaal ah, waftiga ka socday Madaxtooyada ayaa Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle, ku wareejiyay, gaari aan xabaddu karin, iyo lacag xooggan, si uu geed dheer iyo mid gaaban ugu koro hirgalinta damaca lagu boobayo kurisiga degaan doorashadiisu tahay Baladweyne.
Dabageed, wuxuu hore uga mid ahaa, hoggaamiye kooxeedyadii gobolka, wuxuuna soo noqday guddoomiyaha Hiiraan, hadda waa Madaxweyne ku xigeynka Hirshabeelle, waana shaqsiga saameynta ugu weyn ku leh kuraasta Aqalka hoose ee lagu dooranayo Baladweyne.
Sida ay ku warramayaan ilo loo qaateen ah, Fahad, ayaa doonaya inuu gacantiisa ku qorto ergada u codeyneysa, waxuuna Dabageed, looga fadhiyaa inuu maalinta doorashada xareeyo ergada isaga ka socota, oo u badan dhalliyaro laga qaadi doono magaalada Muqdisho.
Dhawaan Yuusuf Axmed Xagar, wuxuu qasab ka dhigay, in dib loogu celsho doorashada kursi Aqalka sare, kaas oo ay hareysay buuq iyo fowdo kadib markii lagu murmay natiijadii soo baxday, waxaana ugu danbeyn ku guuleystay Cali Shacbaan oo saaxiib dhow la ah Dabageed.